China 63MM / 2,5 Inch Herb Grinder 4 Zvipenga Zinc Alloy Grinder neDhiza Gadzira uye Fekitori | Nyundo
63MM / 2,5 Inch Herb Grinder 4 Zvimedu Zinc Alloy Grinder neDhirowa
Iyo yemera grinder 4 zvidimbu & 3 makamuri anotendera kukuya, kuchengetedza, uye kusefera kwemuti. Iyi inosvina yemakwenzi 4 chidimbu dhiza disassembles nyore, ichipa nyore kushandisa uye kuchenesa grinder yemakwenzi.
Item No: GSRP2603
Saizi (Dhigiri x Height): 2,5 x 2.6 inch (63 x 66mm)
Kurera Uremu: 252g
* Iyo yemakwenzi grinder 4 zvidimbu & 3 makamuri anotendera kukuya, kuchengetedza, uye kusefa weporamu. Iyi inosvina yemakwenzi 4 chidimbu dhiza disassembles nyore, ichipa nyore kushandisa uye kuchenesa grinder yemakwenzi.
* Kujekesa kumusoro kunokubvumira kuti uone iyo yose yekukuya maitiro, yakabviswa dhirowa inokutendera kuti utore zvinhu zvikukutu chero nguva. Mesh Screen ye grinder mafirita akanyanya kunaka pollen, iyo shoma yekukasira inosanganisirwa inobatsira poda kuunganidza.
* Yakakodzera kumera mahebhu, zvinonhuwira, tii nezvimwe. Iyo yemakwenzi grinder ine simba remagineti inovhara inobatsira zvakanyanya kuti kuderedze kupera uye chengetedza mishonga yasara iri nyowani uye inonhuhwirira isina.
* Ichi chinonhuwira grinder chakagadzirwa chakasimba uye chakasimba zinc alloy simbi. Kupinza mazino kukupa iwe inokurumidza kusaga chiitiko.Thin Poly O-Mhete yekushevedzera kugaya uye kushoma kupopota, kuwedzera kusimba.
* 4 zvidimbu & 3 makamuri anotendera kukuya, kuchengetedza, uye kusefa weporamu.
* 4 chidimbu dhizaini disassembles nyore, ichipa kuti ishandiswe nyore uye kuchenesa grinder yemakwenzi.
* Kujekesa kumusoro kunokubvumira kuti uone iyo yose yekukuya maitiro, yakabviswa dhirowa inokutendera kuti utore zvinhu zvikukutu chero nguva.
* Mesh Screen ye grinder mafirita akanyanya kunaka pollen, iyo shasha yekukwenenzvera inosanganisira inobatsira poda kuunganidza.
* Isimba remagineti rine simba rinobatsira zvakanyanya kuderedza kupera uye chengetedza mishonga yasara iri nyowani uye inonhuwira isina.
* Meno akapinza achikupa iwe kukurumidza kusaga chiitiko.Thin Poly O-Mhete yekugaya zvinyoro nyoro uye kushoma kupopota, kuwedzera kusimba.